Teratany · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Teratany · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Teratany tamin'ny Jolay, 2018
Inona no lazain'ny bilaogera momba ny ambanivohitr'India?
Azia Atsimo 17 Jolay 2018
Rehefa namaky bilaogy samihafa aho dia matetika izany no milaza fa mampiseho ny fisainan'ny olona saranga antonony ny famahanana bilaogy ao India. Dia tena nieritreritra tokoa aho noho izany raha marina ny lazain'ny bilaogy Indiana mikasika ireo lohahevitra tsy momba ny sarangan'olona antonony na momba ny tanandehibe sy ambanivohitr'i India.
Bolivia: Faniriana sy Fitoniana tamin'ny fetin'ny fahaleovantena
Amerika Latina 16 Jolay 2018
Nanamarika ny faha-182 taonan'ny fahaleovantenan'ny Repoblikan'i Bolivia ny 6 Aogositra. Nomarihana tamin'ny fombafomba sy fetin'olom-pirenena mahazatra ny fotoana. Nirary tsingerintaona ho an'ny firenen'izy ireo ny bilaogera, fa ny hafa kosa naniry zavatra lehibe kokoa. Fotoana hisaintsainana ny fanantenan'izy ireo ho an'ny firenen'izy ireo ihany koa izany.
Shily: Nifarana ny fitokonanana tsy hihinan-kanina nataon'ireo gadra Mapuche rehetra
Tonga tamin'ny fiafarany androany ny fitokonanana faobe tsy hihinan-kanina nataon'ireo Mapuche gadra voaheloka tamnin'ny lalàna iadiana amin'ny fampihorohoroana.
Tao Brazilià, Indiana An'aliny Avy Ao Brezila ”Namindra” Hanohitra ny Governemanta Temer
Amerika Latina 11 Jolay 2018
Nitombo indray ny tanjaky ny tsindry ara-bola ataon'ny indostria momba ny sakafo hatramin'ny 2016 nahatongavan'ny filoha Temer eo amin'ny fitondrana, izay niteraka resabe.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 10 Jolay 2018
Satria efa akaiky ny Fetiben'ny Mozika Masina Manerantany faha-14 fanao isan-taona ao Fez - mizara ny zava-niainan'izy ireo tamin'ny fetibe tamin'ity taona ity ireo bilaogera Maraokana ao an-toerana sy ireo mpandehandeha.